Factory ukhenketho -Linqing Xinri Precision Ukunikela Co., ltd.
I-LINQING XINRI Precision Ukunikela nge CO., LTD. Yintsapho ethwele umenzi okhethekileyo ukusukela ngonyaka ka-2006, ifilosofi yethu: ukuzuza ukuthembeka ngokunyaniseka, ukuphumelela ngomgangatho, ukuphuhlisa ngokwenza izinto ezintsha, nokwenza amathuba ethu ngomoya wokurhwebesha.
Ngeentengiso zonyaka ezingaphezu kwe-US $ 150 yezigidi kunye namandla asendlini angaphezulu kwezigidi ezingama-7000, kumaziko afikelela ngaphezulu kwezigidi ezi-2 zeenyawo zenyawo, i-XRL ngomnye wabavelisi abaphambili behlabathi. Ngapha koko, i-XRL sele ithengisiwe kumazwe angaphezu kwe-120 kwihlabathi liphela.
Ngemizamo edibeneyo yabo bonke abathengisi be-XRL ethwele, sele sithumele kumazwe angama-120 kwihlabathi liphela.
I-XRL ikwaphawulwa nge-notch ephezulu, ephendulayo, nge-24/7/365 inkonzo-zonke ii-imeyile kunye nee-voicemails ziphendulwa ngaphakathi kweeyure ezintandathu, ziqinisekisiwe!
Oko Kuthethwa Ngabaxhasi
I-XRL Co., ineqela lezobuchwephesha elinamandla kunye nejineli yaseJapan ukusombulula iingxaki ezahlukeneyo ekusetyenzisweni nasekusebenziseni iibheringi zethu.
Sinabasebenzi abaqeqeshiweyo ukuba basebenze. Kwaye ngokutsho imizobo yakho okanye iimfuno zakho imveliso siko-ezenziwe.
Ngaphandle kwentengiso yasekhaya, i-XRL bearing sele ithunyelwe kumazwe angaphezu kwe-120.
K kujonge phambili kuphela ekusebenzisaneni nabenzi abavelise ngeebheringi ezikumgangatho ophezulu. Kuya kufuneka asebenzise i-XRL ethwele ukutshintsha iibheringi ze-SKF kwintengiso yokugqibela
Siyaxatyiswa kakhulu kukuthenjwa kwakhe, akathethi kakhulu kwaye wabeka ityala kuthi. Uthatha umgangatho kwindawo ebalulekileyo kwaye sinexabiso elifanayo koku.
Emva komyalelo wetyala, wabeka iiodolo ezininzi kuthi kwakhona, kwaye sithetha ukuba umyalelo omtsha uyeza kungekudala ngoku.
Sizimisele ukumkhulisa njengearhente yohlobo lweXRL ePakistan.
IRashiya yintengiso enkulu yokusetyenziswa. Kodwa njengoko umgaqo-nkqubo anti-yokulahla, Kwakunzima kakhulu ukungenisa kwabaxumi e-China. Njengamava eminyaka intsebenziswano kunye nabahlobo baseRussia kunye namaqabane, sinomthumeli ohamba phambili wokuhambisa ngenqanawa angenza uthutho oluvela eMalaysia okanye eThailand, lunokonga kakhulu abathengi Sinokwenza iThailand neMalaysia CO ukuba umthengi enze imvume yesiko.
Ubudlelwane baseAfrika nathi bulungile njengobo phakathi kwezihlobo ezikude kunye nabamelwane abasondeleyo. Ekuqaleni, uJ waqala kwiisampulu zamaqhekeza ambalwa ukuvavanya umgangatho kunye nengxelo yentengiso. Emva kwexesha uye wonyusa ubungakanani beodolo ixesha nexesha, Nokuba lelona xesha linzima le-coronavirus ngo-Epreli 2020, wabeka iodolo enye kuthi, siyayixabisa inkxaso yakhe. Njengomgangatho ophakamileyo kunye nokupakisha ubuhle be-XRL iibheringi, yathengiswa ngokukhawuleza kwiintsuku nje ezimbalwa emva kokufika ezibukweni.
N yiarhente yethu ePeru, kwaye wayengummeli wethu wokuqala kumazwe akuMzantsi Merika. Uqale kwi-odolo yokuqala encinci kwaye uhambise i-LCL, Kodwa ngoku unoku-odola isitya se-1 * 40FT inyanga nenyanga. Ngoku, ayisiyiyo kuphela iqabane leshishini elinabahlobo abalungileyo ebomini.
Ukuba yiarhente yethu enophawu lweXRL, simnika isipho sokwazisa simahla, ezinje ngeepeni kunye nezikipa ezine-XRL LOGO, kwaye sikwabonelela ngokhuseleko lwentengiso kunye nenkonzo ebalaseleyo, Siphuhlisa intengiso. Kwaye siyathemba ukuba uya kuba yeyona arhente inkulu kumazwe akuMzantsi Merika kungekudala.
Sidibana kumboniso waseShanghai 2016. Senza i-OEM ngophawu lwayo lwe-T, Wayeneeodolo ezintle rhoqo ngonyaka kwaye iibheringi zithengisa kakuhle kwimakethi yaseUkraine.
U-Y evela e-Ukrain, wayephethe ishishini lezinto ezizenzekelayo kwindawo yasekuhlaleni, waya e-China amaxesha amaninzi ngonyaka kwaye wenza ukuthengwa, ubukhulu becala wasiyalela iibheringi ze-LADA, VPZ, VBF, SPZ Njl ..
M usifumene ngewebhusayithi yenkampani, kwaye sele ebeke ii-odolo ezi-5 zeyunithi ngoku. Nangona ubungakanani beodolo bungekho bukhulu, bunokubakho kuphuhliso. Ngapha koko, yeIsiVietnamese Imakethi, sinamava amaninzi kule marike, silindele iibheringi ezikumgangatho ophakamileyo sinokubabonelela ngeCOPE eqinisekisiweyo yokubanceda ukuba benze imvume yesiko kunye nomrhumo ophantsi wokungenisa elizweni.
UCanzibe 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL ethwele
NgoSeptemba 2016 iShanghai yeHlabathi yeHlabathi yeXRL
2016 Autumn Canton Fair XRL ethwele
NgoSeptemba 2017 iShanghai yeHlabathi yeHlabathi yeXRL
2018 Shanghai World Expo XRL ethwele